Taphattootii Biyya C.A.R Dorgommiif Afrikaa Kibbaa Dhaqanii Mootummaan Isaan Duuba Gara Galee
Bitootessa 26, 2013
WASHINGTON DC — Addunyaan dorgommi kubbaa miilaa addunyaa bara 2014tiif Brazilitti taphataniif qophiitti jiran.Taphattootii kubbaa miilaa biyya C.A.R isaani Afrikaa Kibbaa dhaqanii taphatanii galuuf jedhan mootummaan isaan duuba gara galee lafa itti galan dhabanii ammaaf Kaamerun jiran.
Taatullee yoo laftii qabbanoofte akka jecha itti gaafatamaa isaaniitti biyyatti deebihuuf fedhuu qaban. Gama kaaniin dorgommi fiigicha dhiyoo tana Poolaanditti qopheessan irratti Imaanee Margaa,Hiywot Ayyaalee fi Belaynesh Oli Jiraa faan Keeniyootatti aanaanii sadarkaa argatan.
Dorgommii kubbaa miilaa bara 2014 Biraazilitti taphataniif biyyitii dabaran dorgommi
tanaa dabaran beekamutti jiran. Gama kaaniin ammoo dorgommiin kubbaa miilaa ijoollee gannii 20 gadii U-20 jedhani taphachuutti jiran dhumachuutti jirtii bori Masrii fi Naayjeeriyaa,itti aanee ammoo Maalii fi Gaanaatti waliin taphata.Jimaata ammoo abbaa jara kana keessaa moohatetti sadarkaa sadeesosotiif taphataa Ebla Sadii ammoo waancaa tapahtan.Mee qophii Ispoortii caqasaa.